Mogadishu Journal » 2021 » August » 12
WAR DEG DEG AH: Lukaku ayaa Chelsea kaga soo biiray Inter heshiis rikoor kooxeed ah
Romelu Lukaku ayaa ku soo laabtay Chelsea ka dib markii kooxda heysata horyaalka Yurub ay weeraryahanka reer Belgium kala soo wareegtay Inter lacag dhan £ 97.5million (€ 115m). Ka dib markii ay ku guuleysatay Champions League, Chelsea ayaa baadi goob ugu jirtay inay sii xoojiso...
Somalia: James Swan oo warbixin xasaasi ah siiyey Xubnaha Golaha amaanka ee QM
Ergeyga Xoghaya Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan, oo maanta warbixin kooban siinayay Golaha Ammaanka ayaa sheegay in horumar laga sameeyey siyaasadda Soomaaliya, tan iyo markii ugu dambeysay ee uu golahan la hadlo oo aheyd maalmo ka hor 27-kii bihsii May, xilligaas oo...
Rooble oo booqday dhismaha Safaarada Soomaalida ee Nairobi (Daawo Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo dhowaan dib u dhis lagu sameeyey. Rooble ayaa ku soo wareegay qeybaha safaarada, isagoo u kuurgalay sida ay u socdaan howlaha safaarada iyo adeegyada ay...
Dowlada Maraykanka oo shixnad talaal ah ugu deeqday Soomaaliya (Daawo Sawirro)
Waxaa dalka soo gaaray 302,400 talaalka Johnson & Johnson ee COVID-19. Tallaalkan waxaa Soomaliya ugu deeqday Dowladda Mareykanka iyadoo soo marisay xarunta COVAX (CEPI, Gavi, UNICEF, WHO), ujeedaduna tahay in dalka Soomaaliya laga saacido ka hortagga Caabuqa COVID-19....
Madaxweyne Erdogan oo Shaaciyay in uu la kulmo karo Hogaamiye La baadi goobayo
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii sheegay inuu la kulmi karo hoggaamiyaha kooxda Taliban ee sida weyn loo baadi goobayo, si uu gacan uga geysto xaqiijinta nabadda Afghanistan. Dagaal-yahanada Taliban ayaa wax kayar toddobaad gudihiis qabsaday afar meelood...
Raisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay Wakiilo katirsan Beesha Caalamka (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan kula qaatay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya qaar ma mid safiirada Beesha Caalamka . Rooble ayaana Wakiilada beesha Caalamka uu la kulmay kala hadlay arimaha doorashooyinka Soomaaliya ka...
Muxuu RW Rooble u sheegay ganacsatada Soomaalida ee Nairobi? (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacstada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya . Kulanka oo ahaa mid soo dhaweyn ah ayaa ganacstada waxa ay uga xog warameen Ra’iisul Wasaaraha ganacasiga Soomaalida ay ku...